Wax Ka Ogow Kulan Xiisa leh Wareega 16ka Champions League Ee Arsenal v Bayern Munich | Lughaya.Com
Adal: The Land of Ahmed Gurey- (Awdal, Selel, West Gebilay)
Project Name	Home
Wax Ka Ogow Kulan Xiisa leh Wareega 16ka Champions League Ee Arsenal v Bayern Munich
February 19, 2013 webmaster	Kulanka caawa ee Emirates Stadium ayaa ka mid ah kulamada ugu adag ee isbuucaan ee wareega 16ka Champions League, iyadoo Arsenal ay soo dhaweyn doonto kooxdii finalka ka gaartay koobkaan xilli ciyaareedkii hore ee Bayern Munich. Labada kooxood ayaana la filayaa inay ciyaar adag ay ku dhexmarto caawa Lonodn.
Walcott, Podolski, Cazorla BAYERN MUNICH
Iyadoo Nacho Monreal uusan koobkaan ciyaari karin, Kieran Gibbs uu dhaawac yahay, islamarkaanka Andre Santos amaah lagu siiyay Gremio isbuucii hore, Thomas Vermaelen ayay u badan tahay inuu booska daafaca bidix u buuxin doono tababare Arsene Wenger.
Mikel Arteta ayaan weli si wacan uga soo kaban dhaawaciisii, Wenger ayaana la filayaa inuu ku soo shirtago seddexda weerar oo kala ah Theo Walcott, Lukas Podolski iyo Santi Cazorla oo uu keyd geliyo Olivier Giroud.
Javi Martinez ayaa dhaawac ku seegay kulankii ugu danbeeyay ee Bayern Munich ee ay la ciyaareen Wolfsburg, laakiin waxa la filayaa inuu ku soo laabto kooxda hogaanka u heysa Bundesliga.
Claudio Pizarro iyo Holger Badstuber ayaa ka maqnaan doona kooxda martida ah, halka Jerome Boateng uu ganaax ku maqan yahay.
Arsenal iyo Bayern Munich waxa ay kulmeen afar jeer koobkaan Champions League, iyadoo Gunners ay hal mar kaliya badisay.
Kulankoodii ugu danbeeyay xitaa waxa uu ahaa wareega 16ka Champions League, iyadoo kooxda Jarmalka ay wadar ahaan labada lug ku badisay 3-2 xilli ciyaareedkii 2004-05.
Olivier Giroud ayaa afar gool caawiye ka ahaa kulamadii wareega group-yada Champions league; kaliya Zlantan Ibrahimovic ayaa shan gool caawiye ka ahaa.
Lukas Podolski ayaa seddex gool ku dhaliyay seddex darbo oo fursad helay Champions League xilli ciyaareedkan.
Bayern Munich ayaa sagaal ciyaaryahan oo kala duwan ay shabaqa u soo taabatay wareegii group-yada.
Kooxda Jarmalka ayaa sidoo kale darbooyinka goolkooda ku wajahan ay ahaayeen kuwii ugu yaraa ee soo gaaray wareega group-yada kaliya 17.
FC Hollywood markii ugu danbeysay ee ay England ku badiyaan waxa ay aheyd April 2001, iyagoo wareega sideeda 1-0 kaga badiyay Manchester United islamarkaana wadada u sii saarmay inay qaadaan koobka.
Mario Gomez ayaa dhaliyay 25 gool, 26 kulan oo Champions League oo uu ku soo bilowday.
Sport featured permalink
← Manchester Unted Oo Iska Xaadirisay Wreega 8da Ee FA Cup Ingiriiska Ka Dib Markii Ay Ka Gudubta Xalay Kooxda Reading
Jaamacada Carabta Oo Taageertay In Cunaqabataynta Hubka Laga Qaado Dalka Soomaaliya Si Ay Dowladu U Qalabayso Ciidamadeeda →	Ad	MySomaliland.Com OpinionAxmed Siilaanyo Oo Wajiga iyo Indhaha Wax Laga Shubay Maruu Kaqaybgalayay Xaflad Sanadguurada Booliska SomalilandWajiyada Dhabta ee Wasiirada xilka Looga kala Qaaday iyo HadaladoodiiVideo Kahadlaya Musuqmaasuqa Baahsan ee Lagu Eedeeyay Madaxda Dawlada Kumeel gaadhka SomaliyaSuldaanka Guud ee Beesha Habar Cafaan Oo Shir Jaraaid QabtayWareysi oo bixiyay pro. Axmed Ismaaciil oo Kaga Hadlay Arimo BadanKooxda Baadhista Qaramada Midoobay Oo Ku Eedeysay Madaxda Ugu Sarreysa Dowladda KMG ee Somaliya Lunsi-hanti-qaranSafaaradda Britain Ee Magaalada Addis Ababa Oo Fiisadii Dal-ku Galka Britain U Diiday Wasiirka Madaxtooyada Oo Waraaqo Foojari Ah Lagu Qabtay Mar Hore Iyo Xogo Hore Looga DhigayHalkan Riix	Saylicipress.ComDaawo Video: Trailer Filin Cusub Oo Laga Sameeyey Burcad Badeedda Oo Lamagac Baxay“Kapringer:A Hijacking”Daawo Video: Taliska Ciidanka Booliska Maamulka Somaliland Soo Bandhigay Hub Faro Badan Oo Ay Ka Soo Qabteen Magalada BooramaCiidammo Ka Tirsan Booliiska Dalka Kenya Oo Dil Iyo Dhaawac Loogu Geystay Magaalada Gaarisa Ee Waqooyi-bari KenyaMagacaabistaydii iyo maagistaydii Laba Isku Lamaanaa (Qormadii 19aad)Ra’iisul Wasaarihii Hore Ee Soomaaliya Oo Maanta Si Diiran Loogu Soo Dhoweeyey Magalaada Bosaso +SawirroSannad Guuraddii 20 Ee Ka Soo Wareegtay Markii La As-Aaasay Ururka Al-Islaax (Damul Jadiid) Oo Khartuum Lagu Qabtay	Local News Halkan Riix	© 2014 Lughaya.Com	Proudly powered by WordPress.